ထိပ်တန်း3ဥရောပမှာတော့ဆောင်းရာသီသည်အကောင်းဆုံးရထားလမ်းကြောင်းများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ထိပ်တန်း3ဥရောပမှာတော့ဆောင်းရာသီသည်အကောင်းဆုံးရထားလမ်းကြောင်းများ
ကားတစ်စီးထက်ပိုမိုလွယ်ကူပြီးဘတ်စ်ကားထက်ပိုမိုအဆင်ပြေ, ရထားတာကိုတွေ့ကြုံခံစားဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ဥရောပတိုက်တွင်ဆောင်းရာသီနှင်းကျဘို့အကောင်းဆုံးရထားလမ်းကြောင်းများ. ပြန်ထိုင်နေ, မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အပန်းဖြေခြင်းနှင့်အရမ်းလေးစားမိပါတယ် တောင်များ, မြစ်များ, နှင့် ရေကန်များ များစွာမှလမ်းကြောင်း en စဉ် ဥရောပရထားကမ်းလှမ်းရန်ရှိပြီးရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအတွေ့အကြုံများ.
တစ်ခုချင်းစီကိုဆောင်းတွင်း, မြောက်ပိုင်းဥရောပအထက်မိုဃ်းတိမ် aurora borealis ၏စိတ်အရောင်များနှင့်အတူ shimmer (မြောက်ပိုင်းအလင်းများ). အာတိတ်ကောင်းကင်ပြာကိုဖြတ်ပြီးရွှေ့ကြောင်းမယုံနိုင်စရာအရောင်များကိုတွေ့ကြုံခံစားဖို့အများကြီးခရီးသွားများအတွက် '' ရေပုံးစာရငျးတှငျ. မြေကြီးပေါ်မှာရှိသောအနည်းငယ်သောနေရာများထက် aurora borealis သက်သေခံဖို့ပိုနည်းလမ်းများပူဇော် နော်ဝေ. ဒါဟာကျိန်းသေအဆိုပါဖြစ်ပါသည် ဥရောပတိုက်တွင်ဆောင်းရာသီနှင်းကျဘို့အကောင်းဆုံးရထားလမ်းကြောင်းများ, မြောက်ပိုင်းတိုင်းအလင်းများတစ်ဦးအပိုဆောင်း-အပိုဆုကြေးငွေနှင့်အတူ. မှ စတော့ဟုမ်း, ညဥ့်ရထား သငျသညျအဆိုပါသဘာပျော်မွေ့ဖို့အားလုံးကိုလမ်းယူပါလိမ့်မယ်.
Rovaniemi Santa Claus ရဲ့အိမ်မှာအဖြစ်လူသိများသည်. ဒါဟာနေရာတစ်နေရာဖြစ်ပါသည် ခရစ္စမတ်မှော် အတွေ့အကြုံရှိတစ်နှစ်ပတ်လုံးရှိနိုင်ပါသည်. Santa Claus ကျေးရွာနှင့် SantaPark နဲ့တူသောနေရာများသို့သွားရောက်. Rovaniemi Lapland ၏မြို့တော်ဖြစ်ပြီး. ဒါဟာ Lapland ရဲ့ပြည်နယ်မှနေရာဖြစ်သည် ပြတိုက် Arktikum, သစ်တော Pilke သိပ္ပံစင်တာနှင့်ယဉ်ကျေးမှု၏ Korundi အိမ်အခြေတည်.
အဆိုပါ 9-နာရီရထားခရီး ဟယ်လ်စင်ကီကနေစာရင်းအပေါ်ဖြစ်ခြင်းကောင်းစွာရကျိုးနပ်သည် ဥရောပတိုက်တွင်ဆောင်းရာသီနှင်းကျဘို့အကောင်းဆုံးရထားလမ်းကြောင်းများ.
ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသင်များ၏စာရင်းကိုပေးနိုင်ပါသည် သငျသညျနှင်းလျှောစီးသွားကြဖို့နေရာတစ်နေရာပေးခြင်းမရှိဘဲဥရောပ၌ဆောင်းရာသီနှင်းကျဘို့အကောင်းဆုံးရထားလမ်းကြောင်းများ? ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထောက်ခံချက်ပေးအားဖြင့်သင်တို့ကိုအပိုအစွန်အဖျားပေးစဉ်းစားထား နှင်းလျှောစီး ဘတ်ဂျက်အပေါ်, လွန်း!
ဘူလ်ဂေးရီးယားမှလက်မှတ်လေ့ကျင့်ကြောင်းစာအုပ်! ဒါဟာဆောင်းကာလကိုအစက်အပြောက် ဖြစ်ခဲ့တာ အကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းထားသောလျှို့ဝှက်ချက် ခဏဥရောပ၏. ဒါဟာအစာရှောင်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအဘို့ဥရောပရဲ့အအေးဆုံးနေရာအရပ်ဖြစ်လာ အားကစား ယခု, သော်လည်း.
ကျနော်တို့အကြံပြု Bansko. ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအဘို့သင့်မီးရထားလမ်းကြောင်းများအဆုံးသတ်နေရာကောင်းတစ်ခု option ကိုအဖြစ်. ခရီးစဉ်တန်ဖိုးရှိရဲ့တစ်ဦးက quaint အယ်လ်ပိုင်းမြို့. ရလဒ်အနေဖြင့်, Plovdiv ထံမှအဲဒီမှာရထားခရီး၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်တခုတခုအပေါ်မှာအတွေ့အကြုံ. နိုင်ပြီ!
ဆောင်းရာသီမီးရထားခရီးသွားလာကျေးရွာများနှင့်တူ fairytale မှဆီးနှင်း-ဝန်ကိုထမ်းရွက်တောင်စောင်းကနေသင်တို့ကို whisk လိမ့်မယ်တဲ့မှော်အတှေ့အကွုံရှိနိုင်ပါသည်. ဤအအံ့မခန်းရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအံ့ဘွယ်သောအမှုအပေါ်ထုတ်လက်လွတ်မနေပါနဲ့. ZERO ထံမှအခကြေးငွေများ booking နှင့်အတူ တစ်ဦးကရထား Save there’s no excuse not to သူတို့အားလုံးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုခရက်ဒစ်ပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်သင်ဒီမှာလုပ်နိုင်: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-routes-winter-snow%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#NorthernLights #ရိုဗာနီမီ #Snowboarding Bansko ဖင်လန် longtrainjourneys နှင်းလျှောစီး ရထားအကြံပေးချက်များ ရထားခရီးသွား ခရီးသွား ဆောင်းရာသီ